Italian Online Casino Sites - Pamhepo Casino Bhonasi Makodhi
Temperamental Italians vanozivikanwa nekuda kwavo kubhejera uye njodzi, zvisinei, hurumende yeItaly yakatora nguva yakareba kuti inyore mamwe maitiro ekubhejera. Chikonzero chemafungire akaomarara kunharaunda iyi ndechekuti muma90 vanhu vazhinji havana kufarira varaidzo yakadai. Zvichida izvi zvinokonzerwa nekuti kubhejera, vazhinji vanobatana neMafia. Asi nekufamba kwenguva, zvinhu zvachinja uye mumakumi emakore achangopfuura nyika yakaona kukura nekukurumidza mukufarirwa kwekubhejera.
Zivai kune vashanyi kune yedu yepamhepo yekubhejera dhairekitori iyo yazvino modhi yekubhejera muItari ine chinangwa chekudzivirira kusiyaniswa kwemari yevatambi veItaly kunze kwenyika. Kuti "udimbure" vagari veko, avo vari kuenda kunotamba kunze kwenyika, nyika dzese dzemakasinasi dziri padhuze nemiganhu nenyika dzakavakidzana.
Muna 2007, Italy yakanyoreswa zviri pamutemo mitambo yemakadhi zvinoenderana nehunyanzvi uye hunyanzvi, iro razvino simba uye mamwe marudzi ekubhejera zviri pamutemo. Sangano repamutemo rekudzora kubhejera muItari iAAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato), iri kuita basa rekutarisa nekupa marezinesi. Chirango chekutyora mutemo chinogona kuve chakasiyana - kubva pazvirango kusvika kujeri.
Rwokutanga rwe10 Italiya Online Online Casino Sites
Kubhejera pamhepo muItaly kunobvumidzwa zviri pamutemo. Zvinoenderana neongororo dzakasiyana siyana, kubheja pamhepo ndeimwe yenzira dzakakurumbira dzevaraidzo maItaly. Hazvishamisi kuti mari inowanikwa kubva kubhejera pamhepo muItaly iri kukura gore rega rega. Parizvino, vatambi veItaly vanovhura kupinda kune ese ari maviri masosi ekubheja epamhepo muItaly uye kune dzimwe nyika nzvimbo dzekubheja Zvisinei, zviremera zvinonyatsoongorora uye kudzora zvavanoita. Zvinoenderana nemutemo pamhepo kubhejera muItari, kuitira kupihwa masevhisi avo kutenderera nyika, vese vanoshanda vanofanirwa kuwana rezinesi rakakosha. Kutenda nemutemo uyu, indasitiri yemitambo yeItaly inokura, inokura uye inova inobatsira uye inokwezva kune vekunze vatengesi.
Sites online casino inobvuma vatambi vanobva kuItaly
Ona runyorwa rwepamhepo kasino nzvimbo dzinogamuchira vatambi vanobva kuItari, uye vachipa mhando yepamusoro uye yakachengeteka mitambo. Pano iwe unowana zvakasiyana siyana zvevaraidzo kubva kune slot michina kune kasino mitambo inorarama kubva kune vakakurumbira software vatengesi seNetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, nevamwe vazhinji.
Iwe unogonawo kuverenga kuongororwa kwedu kwepaInternet sites, kuti uzive zvakanakisa kutengeswa kwepaIndaneti, mabhonasi uye zvingororo zvekubhadhara zvinowanikwa kuvatambi veItaly.
CasinoToplists rwendo rwunoenderera mberi uye ino nguva isu tichamira pamba peshoko rekuti "kasino" - mune zuva reItari. Nhoroondo, iyo kubhejera kunodaidzwa kuti "kasino", kunyangwe ivo maItari - ingori "imba".
Italy - jogirafi uye nhoroondo muchidimbu;
Nhoroondo yezvekubhejera mune imwe nhoroondo kubva kune 1919 kusvikira nhasi;
Kune 5 casinos pamiganhu yenyika;
sezvo 2010 inobvumirwa kutamba pane imwe kambani yepaIndaneti.
Zvinhu zvishanu zvitsva zveRoma kuItaly guta nekero;
Mashoko anofadza pamusoro penyika uye vagari varo.
Nzvimbo yeItaly uye pfupi yemamiriro ezvinhu emamiriro ezvinhu
Italian Republic - ikona ine hushamwari yeNyika Yekare, chivako chebudiriro uye miziyamu yakavhurika.
Rake rakapfava zita renyika rakagamuchirwa kubva kuCypriot vavakidzani, asi kukosha kwayo kuri prosaic - nyika yemhuru.
Izvi zvinokonzerwa nekuti kwemazuva mazhinji, iyo yakanga iri nzombe yaiva chiratidzo chevanhu, kazhinji inoratidzirwa kuvhara mhumhi yemuRoma.
Guta guru reItari - Roma inoyevedza, moyo yakanyura mukukanganwa kwehumambo hweRoma, iro guta risingaperi, rakarwira vanhu vazhinji. Nhasi uno musha kune vanhu vanopfuura mamirioni mana, vashanyi vazhinji. Roma yave yemarudzi akasiyana-siyana, kune vakanaka vane hunhu uye vanovapa kunakidzwa kwakawanda. Asi nhamba yavo haisanganisiri mitambo yekubhejera yekutamba, inofanirwa kuenda kune kubvumidzwa kwenzvimbo yebhizinesi. Kune inowanika kune vashanyi Roulette, Punto Banco, Blackjack nemitambo makumi matatu kana makumi mana, craps, Chemin de Fer, uye nevanhu vese vanofarira, poker.
Chingave chibairo kuenda kuItaly kungoitira kasino, nekuti kune, zvimwe, imwe yepasirose yepamusoro yezvinhu zvinokwezva: nhare, nhare, mabhiriji, dzimba dzoushe, maresitorendi, minda yemizambiringa, dzimba dzemitambo, mamiziyamu uye zvimwe zvakawanda zvinoshamisa.
Casino uye kubheja muItaly
Kunyangwe maItari ari asina hanya, parizvino padanho repasirese harifanirwe kuvhurwa dzimba dzeKubhejera, masalon, makasino akazvimirira uye kunyangwe horo dzemuchina wekubhejera. Zvakangodaro, akati wandei macasino muItari ari.
Kubhejera uye maItari kuti vamire kwemazana emakore, vanhu vanopisa uye vanofarira kutamba, asi chiKatorike chine chimiro chisina kunaka kune ino yekuvaraidza. Vakuru vakaita chibvumirano uye vakatamisa chitadzo zviri pamutemo zvekuti akatanga kudzivirira zvido zvenyika.
Hurumende inonyatsoziva kuti kana kurambidzwa kubhejera zvachose, kuchabuda mari mudzimba dzokubhejera dzenyika dzakavakidzana, izvo zvisingafadzi zvachose. Naizvozvo, kudzikisira tembiricha yevatambi uye panguva imwechete yekuzadza bhajeti, pamuganhu neSlovenia, France, Switzerland neMonte Carlo inoshanda makasino mazhinji.
Yakazara muItaly anoshanda makasino mashanu, asi hapana kana mumwe wavo asiri muRoma. Zvinoshamisa casino in San Remo zvinyorwa zvinoda kutamba kuMonako kana kuFrance, kune azino muCampione kumhenderekedzo ye Lugugano iri pamuganhu neSwitzerland, casino muSan Vincent inovhara nzira yekupukunyuka kuenda kunzira yeMont Blanc. A 2 inzvimbo muVenice haazobvumi vanhu kuenda kubheja kuSlovenia.
Zvinotoshamisa kuti, muzana ramakumi maviri chete chete, Italy ndiyo yakanga yakarurama, kubhejera kusati kwatanga kutamba zvakasununguka. Kwenguva yakareba yakaramba iri inozivikanwa yeVenetian kasino "Ridotto".
Mushure meHondo Yenyika Yekutanga, hurumende yakavhara makasino makumi mashanu nemapfumbamwe akatanga kuita kurambidzwa kwakasimba pakubhejera kubvira 59. Asi Mussolini akanzwisisa kukuvadza kwemutemo wakadai mubhajeti rehurumende, saka muna 1919, akavhura zviri pamutemo kasino muSan Remo.
Casino San Remo iri mune yakanaka imba, yakagadzirirwa muna 1905 naEugene Ferret. Iri munzvimbo yematunhu. Kwenguva yakareba yaive yega imba yekubhejera muItari, uye ndiko kwaaive, sekureva kwaMussolini chete sekusimbiswa kwemutemo.
Zvakangodaro, chiitiko cheItaly chakatungamira kuchokwadi chekuti mu1933 yakavhurwa Casino Campione d'italia. Yakavakwa muna 1917 ine runako chairwo, rwakajairika yenguva yayo. Ichi chivakwa chakakura chenguva yemberi nhasi ndiyo hombe kasino muEurope.
Mune 1937, mitemo yakaderedzwa zvishoma, muVenice vaibvumirwa kubhejera casinos asi pano vari pasi pekutungamirirwa kwemasuwa.
Mushure meHondo Yenyika II yakabatana nekubhejera yakachengetedzwa, ichiri kushanda makasinos akawanda, asi zvose zvinoedza kuwedzera bhizinesi zvakanyanyiswa.
Inonakidza kwazvo inyaya yekuwanikwa kweiyo 4th kasino muSan Vincent, kumusoro muAlps. Iri munzvimbo yeValle d'Aosta, uko kune tsika dzakanyatsobatana dzeFrance neItari, zvekuti France muna 1947 nereferendamu vaishuvira kuzviisa munharaunda. Vagari vemuSan Vincent vanoisa Roma mamiriro ekuti vagare muItari apo mukasino ichaonekwa. Uye yakavhurwa nekumhanya.
Asi nhoroondo yezviitiko zveiyo Italian kasino, kunyangwe pasi pesimba remaspala, inoziva yakawanda nguva yerima. Hakavimbika hwakagadzwa hunyengeri hwevashandi uye vakuru manejimendi vashandi. Uye muna 1983, akatobata kasino Saint Vincent uye Sanremo zvinongedzo neiyo mafia. Mushure meiyi bhizinesi rakaomarara rakagadziriswazve nekuchinja nzira.
Nhasi, muApennine peninsula inoshanda makasinasi mashanu, uye ivo vachiri maguta, matunhu anobatsira kubhajeti yemari inokwana ye5% yemubhadharo kubva kumakina emuchina, 70% - kubva kumitambo yeUS, 50% - kubva ku ChiFrench.
Kunyangwe hazvo hurumende yeItaly isiri kuenda kumitambo yekasino, mu2010 maItari akakwanisa kutamba mumakamuri epamhepo poker. Zororo rakadai rakaruramiswa nemazana emabhiriyoni emitero akagashirwa mubhajeti.
Chii chinoshamisa, kunyangwe kasino kasino muItari, uye muguta guru ivo vasipo zvachose, nzvimbo idzi dzave rudzi rwechiratidzo uye kukwezva kwevashanyi. Villas dzemahombekombe dzine nzvimbo dzakanaka dzemukati dzakareba nzvimbo yekuitirwa zviitiko zveveruzhinji, zviitiko zveveruzhinji uye zvakavanzika.
Coliseum. Kero: Piazza del Colosseo, 1. Icho mucherechedzo wekare Roma, chivakwa chinoshamisira chekare, chinova chiratidzo cheguta guru reItaly.
Trevi Tsime. Kero: Piazza di Trevi. Tsime rinoyevedza rebaroque rezana ramakore reXVIII, rakagadzirwa naNicola Salvi, rakareba pamusoro penzvimbo yeTrvi yemamita angangoita makumi maviri nematanhatu, ichikanganisa runako uye runako.
Pantheon. Kero: Piazza della Rotonda. Muenzaniso wakanakisa wekuvakwa kweRoma, yekunze inoshamisa uye kushongedzwa kwemukati.
Roman forum. Kero: Via della Salaria Vecchia, 5/6. Nzvimbo yehupenyu hwemagariro ekare eRoma inopa yakanakisa nzwisiso muhupenyu hwezana ramakore rapfuura.
Cathedral yaSaint Paul. Kero: Piazza San Pietro. Iyi ndiyo chechi yechiKristu hombe pasi rose uye chimiro chinoyevedza cheVatican.
Chokwadi chinonakidza pamusoro peItaly neItaly
Italy - nyika ine vanhu vazhinji muEurope.
98% yevagari - Makatorike.
Italy - nzvimbo yekuzvarwa yehafu yenyika inozivikanwa chizi.
MuItaly pane mazita maviri akaenzana: Vatican neSan Morino.
MuItaly, kupfuura mhirizhonga kupfuura imwe nyika ipi neipi muEurope.
Yemazuva ano chiitaly - mutauro weFlorentine, uyo wakakurumbira nekuda kwaDante.
Italia pamepu yeEurope
0.1 Rwokutanga rwe10 Italiya Online Online Casino Sites
2.1 Kubhejera muItaly
2.2 Sites online casino inobvuma vatambi vanobva kuItaly
3 Kubhejera muItaly
3.0.1 Nzvimbo yeItaly uye pfupi yemamiriro ezvinhu emamiriro ezvinhu
3.1 Casino uye kubheja muItaly
3.1.1 Rome inonakidza
3.1.2 Chokwadi chinonakidza pamusoro peItaly neItaly
3.1.3 Italia pamepu yeEurope
grande vegas kasino bhonasi kodhi hapana dhipoziti